यसकारण पक्राउ परे मलेसियाको मसाज सेन्टरबाट तीन नेपाली युवती !
टुडेज नेपाल	 Jan 10, 2018
मलेसियाको सेलेङ्गर राज्यस्थित एक मसाज सेन्टरवाट अध्यागमन विभागको विशेष टोलिले अन्य देशका नागरिक सहित ३ जना नेपाली युवतीलाई पक्राउ गरेको छ । आइतवार साझ अध्यागमन विभागले गरेको विशेष अप्रेसनमा उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । नेपाली सहित…
देउवाले भने -म हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा थिए, राजसंस्था हटाउन मेरो भूमिका थिएन !
पटक–पटक दिल्ली भ्रमणमा जाँदा पूर्वराजाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, महासचिव राम माधवसँग भेटवार्ता गरेका थिए। तर, ती सबै भेटवार्ता सार्वजनिक भएका थिएनन्। स्रोतका अनुसार भेटवार्ताको सुरुमा विश्व हिन्दू…
खुल्ला ठाउँमा शौच गर्नेलाई १५ किलोको माला र १ चकलेट !
राम्रो काम गर्नेलाई माला लगाएर तथा अबीर दलेर सम्मान गर्ने गरिन्छ । राजविराजमा भने यसको ठीक उल्टो अभियान प्रारम्भ गरिएको छ । नगरको सार्वजनिक ठाउँमा शौच गर्नेलाई फूलमाला र अबीरले स्वागत गर्ने अभियान प्रारम्भ गरिएको छ । पटकपटक अभियान…
बोइफ्रेन्ड संग भिडियो कल गर्दै युवती । लिक भएको क्लिप भिडियो हेर्नुहोस !
बोइफ्रेन्ड संग भिडियो कल गर्दै युवती । लिक भएको क्लिप भिडियो हेर्नुहोस अपरिचित ब्यक्तिहरु अनलाइनमा कुरा गर्दा यस्तो हर्कत भुलेर पनि नगर्नुस । अपरिचित ब्यक्तिहरु सग बोल्दा फसाउछ्न भनेर त्यसैले जनचेतना को लागि यो । सामाग्री जतिसक्यो धेरै…
घर निर्माण वा खरिद गर्दै हुनुहुन्छ ? वास्तुशास्त्र अनुसार यस्तो हुनुपर्छ ?
घर, जीवनभरको भरपर्दो र सुरक्षित आश्रयस्थल । घर बनाउनका लागि बर्षौ मिहेनत गर्छाैं । घर कस्तो बनाउने, रंग कस्तो लगाउने, कस्तो सजावट दिने इत्यादि कुरामा निकै ख्याल राख्छौं । कतिले घर निर्माणअघि वास्तुशास्त्र अनुसार जग्गा कस्तो छ, घरको मोहोडा…
वास्तुशास्त्रअनुसार यी दिशा तर्फ फर्किएर खाना पकाउन हुदैन !
बस्तुशास्त्रमा घरको सब भन्दा मुख्य भाग भान्छाघरलाई मानिन्छ। घरमा हुने बिमारी र समस्याका कारण किचेनसंग जोडिएको वास्तुदोष हुन् सक्छ। तपाई कुन दिशामा फर्किएर खाना बनाउनुहुन्छ र कता फर्केर खानु हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। यदि…
आमा बन्दै नायिका निशा अधिकारी
नायिका नीशा अधिकारीका फ्यानहरुलाई खुसीको खबर आएको छ ।२०१८ को सुरुवातसँगै नायिका नीशाले आफ्ना फ्यानमाझ खुसीको खबर साटेकी छिन् । के हो त्यस्तो खुसीको खबर रु नेपाली क्रिकेट टोलीका चर्चित खेलाडी शरद भेषवाकरसँग यसै वर्ष लगनगाँठो कसेकी नीशा आमा…
१२ लाखको घडी अनि करोडौको सम्पति, कति धनि छन् किरण केसी उर्फ रातामकै !
अभिनेता किरण केसी उर्फ रातामकै नेपालका धनि कलाकार मध्येमा पर्ने गर्दछन् । अभिनयसंगै गायनमा सक्रिय किरण बहुमुखी प्रतिभाका धनि रहेका छन् । ‘जिरे खुर्सानी’ मा हिट बनेको रातामकै मात्र नै अहिले उनको बोलाउने नाम बनेको छ । किरणले एक…
यस्तो स्थान जहाँ पुरुषको अभावमा युवतीहरुको विहे गर्न गाह्रो छ
पुरुषको अभावमा युवतीहरु विबाह बन्धनमा बाँधिनबाट नै बञ्चित भए भन्ने खबर कहिल्यै सुन्नु भएको छ ? त्यस्तै भएको छ सिरियामा । जहाँ पुरुषको अभावमा युवतीहरुले समयमा विबाह गर्नबाट बञ्चित बन्न पुगेका छन् । लामो समयदेखि हिंसाग्रस्त सिरियामा ७०…
हामीले विभिन्न खालका सपना देख्ने गर्छौ । हरेक सपनाको आफ्नै अर्थ हुने धार्मिक विश्वास पाइन्छ । कुनै–कुनै सपनाको खास महत्व हुने ज्योतिषशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सपनामा शारीरिक सम्पर्क गरेको, महिलालाई अंकमाल गरेको वा महिला देखेमा…
रुँदै रुँदै मेस्सीले भने–‘जीवनभर नविर्सने घाउ लाग्यो’
Todays Nepal	6mins ago
अश्लील भिडियो बनाएर ब्ल्याकमेल गर्ने प्रेमीको हत्या
Todays Nepal	 23 mins ago
को बने विश्वकै सुन्दर नायक ? सलमान झरे १० औ स्थानमा !
Todays Nepal	 26 mins ago
Proudly By Susan.